Ambongadiny Blutooth e pricer marika ny vidin'ny fanoratana elektronika sy fivarotana mpivarotra elctronics | Zkong
Blutooth e pricer marika mari-pamantarana marika elektronika fivarotana marika elctronics fivarotana
-Name: Blutooth e pricer marika mari-pahaizana momba ny fivarotana elektronika fivarotana elctronics
-Ny haben'ny habeny: 1.54 ”, 2.13 ″, 2.7 ″, 2.9”, 4.2 ”, 5.8 ″, 7.5 ″ 11.6 ″, 13.3 ″
-Teny: Sinoa, Anglisy, Poloney, Espaniôla, Rosiana, Japoney, Thai, Arabo, sns.
-Ny maripana miasa: 0 ~ 45 ℃
-Function: fampisehoana fampahalalana, jiro LED, NFC, fitantanana fivarotana sns
Blutooth E Pricer Label Smart Price Tag Fitaovana elektronika fametahana marika Elctronics Stores
Ny vahaolana momba ny fametahana mari-pamantarana elektronika (ESL) an'i Zkong dia manampy anao hitahiry fotoana amin'ny fanavaozana ny vidiny mandeha ho azy. Izy io dia lafo kokoa noho ny taratasy, ary manatsara ny traikefan'ny mpanjifanao amin'ny vidiny marina sy azo antoka. Izy io dia tantanin'ny vahaolana tena misy eo amin'ny sehatry ny orinasa ka tsy mampiasa afa-tsy mpizara tokana, manambatra ny teknolojia fanodinana Bluetooth, Wi-Fi ary cloud, manome ny vidin'ny tompony farany ambany sy ny fitantanana malefaka indrindra. Tsy mila mpizara ao amin'ny magazay hahitanao ny fitantanana mifototra amin'ny rahona mora sy mahomby.
Zkong ESL dia afaka manova ny vidiny sy ny promos amin'ny talantalana iray amin'ny hafanam-po, na an-tapitrisany, na aiza na aiza, ao anatin'ny segondra. Fantaro fa marina ny vidinao. Ny ESL dia mampifanaraka ny vidiny sy ny fanavaozam-baovao ao amin'ny magazay. Ampifandraiso mivantana amin'ny talantalana ny vidinao. Izany dia hampihena ny vidin'ny asa sy ny conscionable, manatsara ny fizotran'ny fitantanana fivarotana ary mampihena ny fitarainana vokatry ny lesoka
Ny ESL feno sary dia azo ampiasaina hanasongadinana ireo promos ary, miaraka amin'ireo marika Bluetooth misy antsika, ny tolotra manokana, manintona ary manome valisoa bebe kokoa dia azo alefa amin'ny finday avo lenta an'ny mpanjifa mifototra amin'ny fitondran-tenany mividy - manomboka amin'ny tantaran'ny fikarohana ka hatramin'ny fividianana taloha. Inona koa, azonao atao ny miara-miasa amin'ny marika hampiroborobo ny vokariny amin'ny marikao, mitombo ny vola miditra amin'ny sisin'ny talantalana izay ho mailaka kokoa, mahasarika maso - ary ahazoana tombony.
Zkong ESL koa dia afaka manangana traikefa an-tsokosoko manokana, mifanerasera ary manintona. Miaraka amin'ny ESL an'ny Internet of Things (IoT) ahafahantsika mamorona tranombarotra mifandray ary manaova tarehimarika ny sisinao mba hanao fanovana marika tsy misy fetra ao anatin'ny segondra, ary manangana traikefa manokana, mifanerasera ary mahasarika.
Azonao atao koa ny manambatra traikefa virtoaly sy ao amin'ny magazay amin'ny fampisehoana data izay manandanja ny mpanjifa amin'ny Internet, toy ny vidin'ny mpifaninana, ny haavon'ny tahiry ary ny fijerena ara-tsosialy. Ary, azonao atao ny mampiseho fampahalalana - ohatrinona ny vidin'ny kilao, ny fiaviany, ny fampahalalana momba ny fanodinana entana ary maro hafa. Ny traikefa marika dia azo asandratana ihany koa, toy ny atrikasa fandrahoan-tsakafo, torolàlana teknolojia 'fomba' fitarihana sy kilasy fitoviana.
Ataovy mandeha ho azy ny fizotranao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny ZKONG Electronic Shelf Label Display Solution.
Previous: Tagan'ny vidiny nomerika E Fonosana marika Priser ESL ho an'ny fivarotana antsinjarany
Manaraka: Tabilao fampisehoana vidin'ny fivarotana antsinjarany Esl Label Digital Talf Talker ho an'ny mari-pana ambany
Tags marika manokana
Mpanamboatra marika nomerika
Labels momba ny vidiny nomerika
Mpamatsy labels nomerika nomerika
Famaritana talantalana E
Labels elektronika talantalana
Mpanamboatra marika vita amin'ny talantalana elektronika